Tag: sawiro | Martech Zone
Ka soo horjeedda caqiidada caanka ah, suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa ka badan oo kaliya inay la jaan qaado qoraaladaada internetka. Waa inaad la timaaddaa waxyaabo hal-abuur leh oo saameyn ku leh - wax dadka ku kalifaya inay tallaabo qaadaan. Waxay u fududaan kartaa sida qof la wadaagayo boostadaada ama u beddelo beddelaad. Dhowr jecel iyo faallooyin kuma filna. Dabcan, hadafku waa in lagu faafo laakiin maxaa la gudboon in la gaaro